किन आवश्यक छ नेपालीलाई सेन्सस् २०२० मा सहभागी हुन ? – Everest Times News
२०७६ चैत्र ९, आईतवार ०८:०४
हरेक देशले आफ्नो देशको सीमा भित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक मानिसहरुको जनसांख्यिकीय विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रमलाई जनगणना भनिन्छ । सामान्यतय, यस्तो कार्यक्रम हरेक १० वर्षको अन्तरालमा गर्ने विश्वब्यापी प्रचलन छ । सोही अनुरुप वर्ष २०२० अमेरीकाको सेन्सन (जनगणना) वर्ष हो । अप्रिल १, २०२० लाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसको रुपमा मनाइदैछ । जर्ज वाशिन्टन स्वतन्त्र अमेरीकको राष्ट्रपति भए पछि सन् १७९० मा अमेरीकमा पहिलो पल्ट जनगणनाको थालनी गरिएको थियो । अहिले जनगणना कार्यक्रमले करिव २ सय ३० वर्ष पुरा गरि सकेको छ । यस आलेखमा जनगणना सम्वन्धी केही सिद्धान्तगत र विषयगत अवधारणको चर्चा गरिएको छ भने अमेरीकामा बसोवास गर्दै आई रहेका नेपाली समुदायले यो सेन्सन २०२० मा सहभागी हुन किन आवश्क छ भन्ने विषयका केही ब्यवहारीक पक्षहरुको छलफल गर्ने प्रयाश गरिएको छ ।
के के जातियता (ETHNICITY) र जात (RACE) छन् त अमेरीकामा ?
अमेरीकाको सेन्सस व्यरो ले अमेरीकामा बसोवास गर्ने मानिसहरुलाई दुई केवल २ जातियता र ५ जातमा वर्गिकरण गरेको छ ।
जातियता (इथ्नेसिटी) भित्र पहिलो, हिसप्यानीक अथवा ल्याटिनो, दोश्रो, गैह्र हिसप्यानीक अथवा ल्याटिनो गरि दुई जातियता समावेश छन् । हिप्यानीक अथवा ल्याटिनो भित्र क्युवन, मेक्सिकन, पोटो रिकन, दक्षिण अथवा केन्द्रिय अमेरीक राष्ट्रहरु लगायत स्पेनीस संस्कृति वा उद्गम भएका सवै पर्दछन् । यी समुदाय बाहेकका सवै युरोपिन, एसियन, अफ्रिकनहरु गैह्र हिसप्यानीक वा ल्याटिनो जातियता भित्र पर्दछन् ।
जाती (रेस) भित्र अमेरिकन इण्डियन वा अलास्का नेटिभ, एसियन, ब्ल्याक वा अफ्रिकन अमेरीकन, नेटिभ हवाइयन वा अदर प्यासीफिक आइल्याण्डर, र व्हाइट गरि ५ जाति छन् ।
कसरी र कहिले पहिचान गर्यो त अमेरीकी सेन्ससले एसियन वंशजलाई ?
पहिलो सेन्सस १७९० ले “स्वतन्त्र स्वेत पुरुष वा स्वतन्त्र स्वेत महिला”, “अन्य सवै स्वतन्त्र मानिसहरु”, र “दासहरु” गरी तीन किसिमले वर्गिकरण गरेको थिया । १८२० मा आइ पुग्दा “स्वेत”, “दास”, र “स्वतन्त्र अस्वेत” गरि अलग तरिकाले तीन समुहमा वर्गिकरण गरेको थियो । सन् १८४८ मा मेक्सिको बाट क्यालिर्फोनिया, नेभेडा लगायत अहिलेका ७ राज्यहरु मेक्सिको बाट लिए पछि १८५० को दशकमा क्यालिर्फोनियामा रेल(सडक तथा खेती योग्य जमिनको विस्तार गर्न चीनबाट कामदारहरु अमेरीकी सरकारले ल्याएका थिए । तत् पश्चात विस्तारै एसिया महादेशवाट अमेरीका तर्फ मनिसहरु वसाई सर्ने क्रम शुरु भएको थियो । १८७० को जनगणनामा पहिलो पटक एसिया महादेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी “चाइनिज” लाई सेन्ससमा समावेश गरिएको थियो । १८९० को जनगणनामा “जापनिज” पनि समावेश गरियो । १९१० मा आइ पुग्दा “अन्य” भनेर “कोरियन”, “फिलोपिनो” र “भारतीय” वंशजहरुलाई समावेश गरिएको थियो । १९८० मा आए पछि मात्रै जनगणनामा “हिसप्यानिक वा स्पेनीस” भनेर जातियताको प्रश्न समावेश गरिएको थियो । २००० बाट भने “हिसप्यानीक वा ल्याटिनो” भनेर जातियता को वर्गिकराण गरियो । सन् २०१० देखी भने चाइनीज, जापनिज, फिलपिनो, कोरियन, एसियन इण्डियन, भियतनामीज र अन्य एसियन भनेर पहिचान गरेको छ, अमेरीकी सेन्सस ले ।
के आगामी सेन्ससले नेपाली पहिचान गर्ला त?
नेपालीलाई अलग जातको रुपमा स्थापीत गर्न तथा अमेरीकी सेन्सनले पहिचान गर्नका लागी सम्पूर्ण नेपाली समुदायले यो जनगणना कार्यक्रममा सहभागी हुन जरुरी छ । अमेरीकी सेन्ससको नीति अनुसार अप्रिल १, २०२० का दिन अमेरीकमा हुने सवैले सेन्ससमा सहभागी हुन पाउने छ । यसका लागी अमेरीकी नागरिक हुने पर्ने, स्थायी वसोवासको कार्ड हुने पर्ने, सोसल नम्वर हुनु पर्ने आदी इत्यादी जस्ता प्रवधान केही पनि छैन्न। अमेरीकी नागरिक भएका देखी कागजपत्र विहीन, उच्च ओहदामा रही काम गर्ने देखी विद्यार्थी सम्म सवैले सेन्सस २०२० मा सहभागी हुन सक्ने छन् । यसमा सहभागी हनुका लागी कसैको पनि महत्वपूर्ण सुचनाहरु जस्तो उसको कानुनी स्टेटस, आम्दानी, सोसल नम्वर, कामको प्रकृति आदी इत्यादी कुनै पनि सुचना पनि दिनु पर्दैन । पर्दछ त केवल तपाईको जनसाख्यिकिय विवरण, नाम, उमेर, वतन र तपाइको जातियता र जात । यसर्थ, विना संकोच सवै नेपाली जनगणनामा सहभागी हुनु तपाई र तपाईको भविष्यको निम्ति अत्यन्त आवश्यक छ । यो अमेरीकमा वसोवास गर्ने सवै नेपाली ले नेपाली समुदायको लागी गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण दायित्व पजि हो । यसलाई अवसरका रुपमा सवैले सदुपयोग गरौं । पक्कै पनि सवै नेपाली यसमा सहभागी भए आगामी सेन्सस २०३० ले नेपाली लाई पहिचान गर्ने छ ।
किन आवश्यक छ त नेपाली समुदायले सेन्सस् २०२० मा सहभागी हुन ?
अघिल्ला जनगणना देखी एसिया उद्गम भएका केही एसियाली अमेरीकनहरु लाई उनीहरुकै पहिचान दिएको छ । जस्तो कि, चाइनीज, भियतनामीज, फिनपिनो, एसियन इण्डियन, कोरियन, जपनीज भनेर पहिचान गरेको छ । यी एसियन अमेरीकनलाई अमेरीकी सेन्ससले पहिचान गर्नुको कारण उनीहरुको बाक्लो जनसंख्या हो । यसको मुख्य कारण अघिल्ला जनगणनमा उनीहरुको उल्लासमय सहभागिता हो । यस हिसावले पनि, यस जनगणनामा सम्पूर्ण नेपाली समुदायले सहभागी हुने हो भने आगामी सेन्सस २०३० मा नेपाली भनेर अमेरीकी सेन्ससले चिन्ने छ । यसले एका तर्फ अमेरीकी सरकारको जाति विभाजन प्रणालीमा नेपाली ले आफ्नो पहिचान पाउने छ । अर्को तर्फ भने सरकारका तर्फबाट हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा नेपाली समुदायको पहिचानका साथै पहुाच तथा स्थान पनि सुरक्षीत गर्ने छ । महत्वपुर्ण कुरा अमेरीकी मुलधारको राजनीति तथा सरकारी नीतिमा नेपाली समुदायको पहिचान तथा स्थान स्थापित गर्न अहम भूमिका खेल्दछ ।
सवै भन्दा व्यावहरिक लाभ भनेको तपाईको कोही अमेरीकी साथीले तपाईको उद्गमको वारेका प्रश्न गर्यो भने नेपाली हुा भने पछि उसले बुझ्ने छ, पहिचान गर्ने छ । अहिले जस्तो तपाईले पुन एसिया भित्रको देश या भारत र चीनको छिमेकी देशको भनि चिनाइ रहनु पर्ने छैन । यस अर्थ जनगणनामा सहभागी हुदाा अदर एसियन (अन्य एसियन) छनौट गरि तल कोष्ठक मा अनिवार्य रुपमा नेपाली लेख्नु पर्दछ ।
जनगणना कार्यक्रममा आफू हौउं, आफ्नो समुदायलाई पनि सहभागी हुन प्रेरित गरौं । अमेरीकी भूमीमा, मुल राजनीतिमा तथा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली समुदायको पहिचान खोजौ, स्थान स्थापति गरौं ।
लेखक न्युयोर्कस्थित योर्क युनिभर्सिटिका प्रोफेसर हुन ।